चाबहिलस्थित ओम अस्पतालमा पित्तथैलीको पत्थरी निकाल्ने क्रममा सानो आन्द्रा काटिएपछि बिरामीको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका–१० की ५० वर्षीया रामप्यारी थापामगरको बिहीबार बिहान मृत्यु भएको हो । मगरको गत शुक्रबार शल्यक्रिया गरिएको ...
सुर्तीजन्य पदार्थमा मानिसको स्वास्थ्यमा असर गर्ने हजारौँ रसायन हुन्छन्। जसमध्ये निकोटिन सबैभन्दा हानिकारक रसायन हो। जुन रसायनका क्यान्सर गराउँछ। धूम्रपानको कारण फोक्सो, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा सुरुमै असर देखापर्छ। बिस्तारै शरीरका आँखा, मुख, पेट, ...
सुनसरीको धरानमा पहिलो पटक ‘एडिस एल्बो पिकस’ जातको लामखुट्टे फेला परेको छ। विजयपुरको वडा समिति कार्यालय नजिकै होटलले जम्मा गरेको पानीमा उक्त जातको लामुखट्टेका अन्डा, लार्भा र प्युपा फेला परेको स्वास्थ्यकर्मीले ...
काठमाडौं: मीठो स्वादसँगै उच्च पोषक तत्वयुक्त लिची फूर्तिदायक हुन्छ। यो मूलतः चीनबाट आएको फल हो। यो फल २००० ईशापूर्वदेखि नै चीनमा खाँदै आइएको हो। भारत विहारस्थित भारतीय कृषि अनसन्धान परिषद, राष्ट्रिय लिची ...
धरान : धरान उपमहानगरपालिकामा महिना दिनदेखि फैलिएको डेंगु रोगको संक्रमण अझै नियन्त्रण हुन सकेको छैन । डेंगु नियन्त्रण गर्न उपमहानगरपालिका र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले पहल थालेको भए पनि दिनप्रदिदिन ...
डेंगु भाइरस किन छिटो फैलिन्छ ? जोगिन के गर्ने ?
डेंगु भाइरसका कारण डेंगु रोगको संक्रमण हुन्छ। एडिज नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगु भाइरस एक–अर्कामा सर्छ। डेंगु भाइरस चार प्रकारका हुन्छन् । जसलाई भाइरस १,२,३ र ४ मा विभाजन गरिएको छ । ...
मुलुककै जेठो वीर अस्पतालको सेवा विस्तारका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चार वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नै कार्यकालमा थालेको अस्पताल विस्तारको योजना बर्सेनि बजेटमा ...
काठमाडौं: सुर्ती सेवनबाट नेपालमा बर्सेनि २५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा योजना शाखाका प्रमुख डा. विकास देवकोटाले सुर्ती सेवनको असर डरलाग्दो बनिरहेको बताए। मन्त्रालयले शुक्रबार ...
उमेर नपुग्दै कपाल झर्ने समस्या भएका पुरुषको संख्या पछिल्लो समय बढ्दो छ। कपाल झर्नु आफैँमा रोग भने होइन। पुरुषमा कपाल झर्नुको मुख्य कारण वंशानुगत गुण हो। यद्यपी यो सबैमा देखिन्छ भन्ने हुँदैन। पुरुषको ...
काठमाडौं : सरकारले तीन वर्षअघि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसबेलाको बजेटमा पहिलो चरणमा बुटवल, बर्दिवास र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको ...
काठमाडौं: हाम्रो कम्बर (ढाड) को लचकताले नै हाम्रो यौवनावस्था कायम गर्छ। जति कम्मरको लचकता हुन्छ त्यति नै शरीर बलियो र लचिलो हुन्छ। कम्मर, ढाड अर्थात् पिठ्यूँ जसलाई हामी मेरुदण्ड भन्छौँ। यो शरीरको ...
काठमाडौँ : नेपाल नर्सिङ सङ्घमा धर्ना दिइरहेका सहिद धर्मभक्त अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सलाई प्रहरीले प्रक्राउ गरेको छ। प्रत्यारोपण केन्द्रका नर्सहरू पुराना कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, काम र अनुभव हेरेर बढुवा गर्नुपर्ने, आफ्ना मान्छेलाई ...